Mareykanka Oo shaaciyay Inuu Dhexgalaayo Somalia iyo Kenya – KHAATUMO NEWS
Mareykanka Oo shaaciyay Inuu Dhexgalaayo Somalia iyo Kenya
Dowlada Mareykanka ayaa ka dhawaajisay in ay ka shaqeeneyso sidii xal loogu heli lahaa loona qaboojin lahaa xiisada siyaasadeed ee xiligan ka dhax aloosan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya.
Danjiraha Mareykanka ee Dalka Kenya Kyle McCarter ayaa sheegay in dowladiisu ka shaqeynayo sidii uu fududeyn laheyd xal ka gaarista khilaafka ka taagan dhul badeedka Kenya iyo Soomaaliya.
Kyle McCarter ayaa sheegay in uu aamisan yahay in wadahadal lagu dhameeyo muranka dhinaca badda ee labada dal u dhaxeeya isla markaasna ay tahay tallaabada ugu wanaagsan ee lagu soo afjarayo xiisadaasi.
Danjiraha Mareykanka ee dalka Kenya ayaa sidoo kale sheegay in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya aysan kala maarmin ayna yihiin laba dal oo wadaaga xiriir dhaqaale iyo mid dhinaca amaanka ah.
Dowlada Soomaaliya ayaa ka biyo diidsan in muranka dhinaca badda ee kala dhaxeeya Kenya lagu dhameeyo wadahadal halka dowlada Kenya dadaal badan ku bixineyso in dacwada laga soo celiyo Maxkamada Caalamiga laguna dhameeyo wadahadal.
Previous Post: Deg Deg:Xaalad Roobow Oo Halis Ku Jirta
Next Post: Deg Deg Daawo:Shirweyne Beesha Bahrarsame Uga Furmay Qoriley,